Ololahii dacwada Muqdisho oo si habsami leh ugu baahay magaalada usbuucii labaad
iyo isticmaalka Daroogadu Saamayn intee le'eg Bay ku Leeyihiin Faafidda Cudurka AIDSKA ee Muqdisho Guji
MAXAA KA JIRA IN ISKUULKA ABLAAL EE MUQDISHO UU DIIDAY IN LAGU DHIGTO XIJAABKA
Waxaa SomaliTalk soo gaarey warar sheegaya in iskuulka Ablaal uu diidey xijaabka..
Warbixin: Dhibaatooyinka Manaahijta kala duwan ee Dugsiyada Xamar
Waraysi: Maamulaha iskuulka iyo laba Gabdhood oo dhigta dugsiga.
Dagaaladii sokeeye ee soo foodsaaray Soomaaliya waxay burbur ba'an u geysteen dhammaan dhismihii dowladnimo iyo Guji...
Dhakhaatiirta Isbitaalka SOMRUS oo
Daawooyin lacag la’aan ah ugu deeqay maxaabiista ku jirta Xabsiga Dhexe ee Magaalada Muqdisho…. Guji...
Waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho aakhirkii usbuucaan 14-16/01/04 Muxaadarooyin kala duwan oo ka dhacay 27 xarumood oo ku kala yaal degmooyinka: Xamar wayne, Shangaani, Shibbis, Kaaraan, Yaaqshiid, Wardhiigley, Hawlwadaag, Hodon, Waabari, wadajir & Huruwaada cusub.
Duruusta goobahaas laga jeediyay waxaa ka mid ahaa: Walaalnimada Islaamka, Isu kaashiga khayrka, Iswaafajinta waajibaadka guud & kuwa gaar ahaaneed ee haweenka, Tawbadda, Xaaraanimada dhiigga muslimka, maalkiisa & sharaftiisa, Ku han waynaanta khayrka, Barashada Cilmiga, Dacwada, & Sarraynta Islaamka. Waxaa intaa dheeraa Muxaadarooyinkii usbuucii hore oo culimadu ka soo jeediyeen goobo kale.
Waxaa ka qayb qaatay jeedinta Muxaadarooyinkaan culimo & ducaad ay ka mid yihiin: Sh. C/laahi Maxamuud Ciise, Sh. Xasan Daahir, Sh. Maxamed Yaasiin, Sh. Axmed Bile Xasan, Sh. Maxamuud Macallin Nuur, Sh. C/laahi Hiiraan, Sh. Sahal cali Axmed, Sh. C/raxmaan Xaashi, Sh. Muxyadiin Maxamuud, Sh. C/casiis cali Axmed, Sh. Axmed Cabdi iyo culimo kale. Muxaadarooyinkaan oo qayb ka ah olole dacwadeed oo socon doona seddex bilood ayaa dadwaynaha reer Muqdisho si wayn ugu riyaaqeen ugana qayb qaateen, waxaana muuqata in dadwaynuhu aad u tabayeen cid daboosha baahidaan, iyadoo ololahaani si habaysan ugu baahayo magaalada ayaa waxaa isa soo taraya dalabaadka ka imaanaya degmooyinka & xaafadaha aan ololahaani wali gaarin.
Waxaa xusid mudan in dadwaynuhu si xilkasnimo leh uga qayb qaadanayaan barashada diinta & fidinteeda, waxaa kale oo soo if baxaya kalsoonida dadwaynuhu ku qabaan in islaamku yahay kan kaliya ee xallin kara mashaakilka haysta, taasoo culimada culays ku saaraysa inay labanlaabaan dadaalkooda ku aaddan badbaadinta ummadda & samatabixinteeda.
Xafiiska Dacwada & Tarbiyada ee Soomaaliya oo soo qaban qaabiayay ololahaan dacwadeed ayaa qorshaynaya sidii ololaha noocaan ah loogu baahin lahaa dalka oo dhan, wuxuuna ugu baaqayaa dadwaynaha Soomaaliyeed culimo & caamaba inay isu kaashadaan khayrka & ka hortagga xumaanta.
Xafiiska Dacwada iyo Tarbiyada ee Soomaaliya:
Olole Dacwadeed oo ka Bilowday Muqdisho
Ujeeddooyinka Ololahaan waxaa ka mid ah: In la Dardargaliyo dacwada magaaladaan Muqdisho & agagaarkeeda, in Guji 10/1